तीजमा मेकअप गरेर नाच्नु हुनुहुन्छ ? साबधान यही उमेरमा गाला चाहुरी पर्ला हरेकले जानी राखौ – ताजा समाचार
तीजमा मेकअप गरेर नाच्नु हुनुहुन्छ ? साबधान यही उमेरमा गाला चाहुरी पर्ला हरेकले जानी राखौ
तीज नारीहरुको बिशेष पर्व हो।सुन्दरता देखाउने पर्वको रुपमा रहेको तीजलाइ समग्र नेपालीले आफ्नै तरिकाले मनाउने गरेको देखिन्छ तर तीज मनाउदै गर्दा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरेको भने पाईन्न।पछिल्लो समय फेसियल गर्दा हुने असरको बारेमा कसैले केहि बोलेको पाईन्न।
एता फेसियल हाउसकि सुष्मा महराले भने तीजमा बढी मेकअप गर्दा शरिरमा पर्ने असरको बारेमा खुलेर बोलेकी छ बरिष्ठ ब्युटीसियन समेत रहेकी फेसियल हाउसकि संचालिका महराले पछिल्लो समय महिलाहरुले आफ्नो शरीरको ख्याल नगरेको समेत बताएकी छिन।हेरौ हामीले गरेको बिशेष कुराकानी :
गर्मी मौसमका लागि डे पार्टी मेकअप टिप्स
ममता रार्ई, मेकअप आर्टिस्ट
जो–कोही हिजोआज आफूलाई स्मार्ट देखाउन चाहन्छन् । अझ पार्टीमा सहभागी हुँदा पहिरनसँगै राम्रो मेकअप गरेर जान सबैको इच्छा हुन्छ । थोरै मात्रै मेकअप ज्ञानले तपाईंको व्यक्तित्वमा धेरै फरक पार्छ । यसका लागि हामी घरैमा आफैँ सामान्य पार्टी मेकअप गर्न सक्छौँ । त्यसमा पनि गर्मी मौसममा पसिना र पानीले मेकअप लत्पतिने डर हुन्छ । त्यसैले, अब जान्नुहोस्, गर्मी मौसममा पार्टीमा जानुअघि घरमै गरिने मेकअप टिप्स :
अनुहारमा आइस क्युब र टोनर लगाउनुहोस्
मेकअप सुरु गर्नुअघि अनुहारको सबैतिर आइस क्युब बिस्तारै दल्नुहोस् । यसले अनुहारलाई फ्रेस लुक दिनुका साथै मेकअप धेरैबेरसम्म टिक्न मद्दत गर्छ । त्यसपछि टोनर लगाउनुहोस् । टोनरले स्किन टाइट बनाउन सहयोग गर्छ । साथै, मेकअप अड्याउन पनि मद्दत गर्छ ।
सुरुमा आँखाको मेकअप
अनुहारमा आइस क्युब र टोनर लगाएपछि आँखाको मेकअप सुरु गर्नुपर्छ । आँखाको मेकअप गर्दा त्यसको आकार र बनोटलाई ध्यान दिनुपर्छ । सोहीअनुसार मेकअप सुरु गनुपर्छ ।
आँखाको मेकअप गर्दा सबैभन्दा पहिला आइब्रो कोर्ने । अनुहारको सेपअनुसार आइब्रो कोर्न जरुरी छ । त्यसपछि आइब्रोलाई कन्सिलरले सेप दिने । बेस लगाउने । यत्ति गरेपछि आँखाको बनोट (चिम्सा वा ठूलो आँखा) कस्तो छ सोहीअनुसार बनाउने । चिम्सा अथवा सानो आँखामा स्मोकी बनाई हाफ कट क्रिएट गर्नु राम्रो । यसले ठूलो देखाउँछ । अथवा स्मोकी आई मेकअप गर्दा मात्रै पनि राम्रो हुन्छ । त्यसमा हल्का ग्लिटर लगाउँदा झनै राम्रो हुन्छ । ठूलो आँखामा भने साइड स्मोकीमा हल्का ग्लिटर लगाउनु राम्रो मानिन्छ । आइस्याडोको काम सकेपछि आइलाइनर र त्यसपछि मस्कारा लगाउनुपर्छ । डे पार्टीमा आइल्यासेस नलगाउँदा राम्रो हुन्छ ।
आँखाको मेकअप सकेपछि अनुहारको मेकअप सुरु गर्नुपर्छ । मोस्चराइजर लगाउनुपर्छ । यसले छाला नरम बनाउँछ । साथै, ब्लेन्डिङ गर्न पनि सजिलो बनाउँछ ।
प्राइमरले अनुहारमा भएको पोर्सहरूलाई छोप्छ । त्यसैले, यो छालाको प्रकृतिअनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ । छाला चिल्लो वा सुक्खा कस्तो छ, सोहीअनुसार छान्न जरुरी छ । अनुहारभरि बस्ने गरी बिस्तारै ब्लेन्ड गर्नुपर्छ ।
गर्मी मौसममा म्याट फाउन्डेसनको प्रयोग गर्नुपर्छ । नत्र पसिनाले मेकअप बग्ने सम्भावना बढी हुन्छ । म्याट फाउन्डेसनले बग्नबाट रोक्छ । यसलाई पनि अनुहारभरि बस्ने गरी दल्नुपर्छ ।
कम्प्याक्ट अथवा लुज पाउडर
म्याट फाउन्डेसन, कम्प्याक्ट र लुज पाउडर लगाउँदा आफ्नो वर्णको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । काली, गहुँगोरी र गोरी कुन वर्ण हो त्यहीअनुसारका चिज लिनुपर्छ । वर्णसँग मेल खाएन भने एकदमै भद्धा देखिन्छ ।
काउन्टेरिङ भनेको अनुहारलाई सेप दिनु हो । आफूलाई कस्तो सेप बनाउनु छ वा कस्तोले सुहाउँछ सोहीअनुसार कटिङ दिनुपर्छ । काउन्टेरिङ धेरै लाम्चो छ भने हल्का गोलो वा धेरै गोलो छ भने हल्का लाम्चो सेप देखाउन सकिन्छ ।
माथि उल्लेखित काम सकेपछि गालामा हल्का रोज लगाउने । आफूलाई इच्छा लागेको रङअनुसार रोजको प्रयोग गर्न सकिन्छ । हल्का रातो वा हल्का पिंक ।
डे पार्टी मेकअप भएकाले अन्तिममा हल्का रङको लिपस्टिक लगाउनुपर्छ । आफ्नो रोजाइअनुसारको रङका लिपिस्टिक लगाउन सकिन्छ ।
मेकअपलाई पूर्णता दिन अन्तिममा हल्का हाइलाइटरको प्रयोग गर्ने । यसले अनुहारलाई चमक दिन्छ । तर, एकदमै कम मात्रामा लगाउने । यत्ति गरेपछि पार्टी मेकअप सकिन्छ । मेकअप सकेपछि सेटिङ स्प्रे लगाउनु पर्छ ।